विवाह पृष्ठहरू - तपाईंले जान्न आवश्यक सबै कुरा | बेजिया
विवाह पृष्ठहरू: तपाईंले जान्न आवश्यक सबै कुरा!
सुसाना Godoy | 05/05/2022 16:00 | बोडस
हामीलाई थाहा छ कि विवाहमा तपाईले धेरै चीजहरू बाँध्नुपर्छ ताकि अन्तमा, हाम्रो सपनाको दिन हो। यस कारणको लागि, खातामा लिनको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो विवाहका पानाहरू। यो सत्य हो कि सबै विवाहहरू देखिएका छैनन्। यद्यपि जब तिनीहरू गर्छन्, तिनीहरू यस्तो विशेष दिनमा मिठास र मौलिकताको साथ आउँछन्।
त्यसोभए, यदि तपाइँ विवाह प्रतियोगिताहरू लिने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ सुरुमा सुरु गर्न र सोच्न सक्छ तिनीहरूको कार्यहरू के हुन् (एक भन्दा बढी हुन सक्ने हुनाले), तिनीहरूले आफ्नो हातमा के बोक्नेछन्, तिनीहरू कहिले प्रवेश गर्ने? र धेरै धेरै। त्यसोभए, विवरण नगुमाउनुहोस् र पक्कै पनि, तपाईलाई चाहिने सबै कुरा थाहा पाए पछि, तपाइँ तिनीहरूको लागि रोज्न जाँदै हुनुहुन्छ।
1 पृष्ठहरू के हुन्
2 पृष्ठ कसरी लुगा लगाउँछ?
3 पृष्ठहरूको कार्यहरू के हुन्
4 विवाह पृष्ठहरूको उमेर
पृष्ठहरू के हुन्
विवाह पृष्ठहरू ती बच्चाहरू हुन् जो विवाहको जुलुसमा मुख्य पात्र हुन्। त्यसोभए यसको एउटा कार्य, जसरी हामी पछि देख्नेछौं, दुलही र दुलहीको साथमा हुनेछ। तर यो सत्य हो कि तिनीहरूको पनि एउटा अर्थ छ र त्यो हो कि तिनीहरूको भूमिका कुनै नयाँ होइन तर हामीले पुरातन रोममा जानुपर्छ। उनको मा, केही साना केटीहरू देखा परेका थिए जसले दुलही र दुलहीलाई फूल र गहुँ चढाए। दुबै विकल्पहरू समृद्धि र उर्वरताको प्रतीकको साथ विचार गरियो। बिस्तारै, केटा र केटी दुवैले जुलुसलाई जीवन दिए ताकि विवाह गर्ने जोडीको पक्षमा राम्रो भाग्य होस्।
पृष्ठ कसरी लुगा लगाउँछ?
सत्य यो हो कि कपडाका लागि धेरै शैलीहरू छन्। सधैंभरि तपाईं विवाहको विषयवस्तुको आधारमा थोरै छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। तर सत्य यो हो कि, एक सामान्य नियम को रूप मा, केटीहरु सेतो वा ecru जस्ता हल्का रंगहरु मा लुगा लगाउँछन्। ब्यालेरिना-प्रकारका जुत्ताहरू र तिनीहरूको कपालमा फूलहरू वा धनुहरू सहित। जबकि केटाहरूले शर्ट र भेस्ट, साथसाथै सूट र बो टाई लगाउन सक्छन्, यदि तपाइँ तपाइँको विवाह धेरै परिष्कृत शैली होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने। तर हामी भन्छौं, तपाईं एक अधिक अनौपचारिक शैलीबाट टाढा जान सक्नुहुन्छ जुन उनीहरूको लागि अझ सहज हुनेछ।
पृष्ठहरूको कार्यहरू के हुन्
तिनीहरूसँग धेरै प्रकार्यहरू हुन सक्छन्, जस्तै हामीले अघि बढेका छौं। कोही दुलहा पर्खिरहेको बेला आइपुग्ने जिम्मेवारीमा छन् र तिनीहरूले दुलहीको आगमनको घोषणा गर्ने चिन्ह ल्याउँछन्। यो एक चालाक वाक्यांश हुन सक्छ वा होइन, तर यो एक साधारण चेतावनी हुन आकार हुनेछ। दुलहीको आगमनको ठीक अघि, केटीहरू टोकरी र फूलको पंखुडीहरू लिएर देखा पर्नेछन्, जुन तिनीहरूले पछि छोड्नेछन्।। साथै, अन्य विवाह पृष्ठहरूले गठबन्धनहरू लगाउन सक्छन् र दुलही र दुलहीको छेउमा दुवै पक्षमा खडा हुन सक्छन्। अन्तमा, दुलही पछि, अन्य पृष्ठहरू देखा पर्न सक्छन् जसमा उसमा पोशाक राख्ने कार्य छ, जबसम्म उसलाई आवश्यक हुन्छ।
विवाह पृष्ठहरूको उमेर
यस अवस्थामा, उमेर पनि महत्त्वपूर्ण छ। किनभने यो सिफारिस गरिएको छ कि तिनीहरू3वर्ष भन्दा बढी र 8 भन्दा कम छन्। कुनै पनि कुरा भन्दा बढी किनभने धेरै जवानहरू चाँडै थकित हुनेछन् र उनीहरूसँग मेल खाने मिशन पूरा गर्दैनन्। त्यसै गरी, जब तिनीहरू ठूला हुन्छन् तिनीहरू विवाहको पार्टीको हिस्सा बन्न चाहँदैनन्। त्यसैले,3र 8 वर्ष बीचको उमेर विचार गर्न राम्रो उमेर मानिन्छ। पक्कै पनि तिनीहरू र तिनीहरूसँग, विवाह सबैभन्दा मौलिक हुनेछ। यदि तपाईंसँग एउटा मात्र पृष्ठ छ भने, यो घण्टीहरू ह्यान्डल गर्ने एक हुन सक्छ। यदि तपाईंसँग साझेदार छ भने, यो सधैं तपाईं दुई हुन सक्छ जसले गठबन्धनको ख्याल राख्छ। यद्यपि विवाह पृष्ठहरूको कुनै निश्चित संख्या छैन, यो सत्य हो कि त्यहाँ6भन्दा बढी नहोस् भनेर पनि सिफारिस गरिन्छ। पक्कै पनि, तपाईंको परिवारका सदस्यहरू र केही साथीहरूको बच्चाहरू बीच, तपाईंले सधैं विशेष स्पर्शको आनन्द लिन सक्षम हुनुहुनेछ। तिम्रो बिहेको लागि !!
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » जीवन शैली » बोडस » विवाह पृष्ठहरू: तपाईंले जान्न आवश्यक सबै कुरा!
यदि तपाइँ आफ्नो पार्टनरको लागि माया महसुस गर्नुहुन्न भने के गर्ने?
सजावट मिलाउन उपकरणहरूको लागि चालहरू